I Kwesịrị Iche Brandkọkọrịta Mgbasa Ozi Gị? | Martech Zone
Anyị na-arụ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa ịzụlite ọdịnaya dị omimi na nyocha maka infographics, akwụkwọ ọcha, vidiyo na usoro ịzụ ahịa ọdịnaya ha dum. Maka ọtụtụ akụkụ, anyị na-anwa iji ike nke ụdị ha mgbe niile. Ọ dị mkpa ịnwe olu na ihe ngosi metụtara ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ya na ihe ha na-ekesa.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, udi ihe gi bụ ihe olile anya gị na-eche maka mgbe ọ nụrụ aha gị. Ọ bụ ihe ọ bụla ọha na eze na-eche na ọ maara banyere aha gị na-eweta aha gị-ma nke bụ ezie (dịka ọ na-abata na igbe akwa-akwa-akwa-akwa), na mmetụta uche (eg Ọ bụ ihunanya) Aha gị dị adị; ndị mmadụ nwere ike ịhụ ya. Ọ ofu. Ma ika gị dị naanị n'uche mmadụ. Jerry McLaughlin, Kedu ihe bụ Brand, Anyway?
N'oge ndị ọzọ, anyị pụọ n'ichepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ha. Ọtụtụ mgbe ọ bụ mgbe anyị mepụtara infographics. Mgbasa ozi a na-ekesa dị ka akwụkwọ ọcha na akwụkwọ akụkọ nwere ohere ka ukwuu ịkekọrịta gafee saịtị. Mgbe ha pụtara dị ka otu nnukwu mgbasa ozi, agbanyeghị, ọ na-ewute ohere nke ịkekọrịta ọdịnaya ahụ. Ikwesiri ikpebi otu esi eche ike iji kesaa ọdịnaya gị kesara yana ọ ga-emebi ikike ịkekọrịta.
Dịka ọmụmaatụ, anyị arụ ọrụ na a usoro nke infographics maka Ndepụta Angie. Ndepụta Angie nwere ụdị ntụkwasị obi dị ịtụnanya na nke siri ike na webụ na n'iji akara ha eme ihe. Ndị mmadụ ga-ekekọrịta ọdịnaya naanị n'ihi na ọ tụkwasịrị ya obi ma nwee ike ịmata ya. Lelee a Nduzi maka Nlekọta eze na Oge site na Oge Nduzi maka Ndozi ala na ahihia ahihia. Anyị ejirila aha njirimara nke Angie, nhazi na akara ngosi nke ọ bụla n'ime ihe ọmụma ahụ:
N'oge ndị ọzọ, anyị na ụlọ ọrụ ndị amachaghị ama na enweghi akara siri ike rụkọrọ ọrụ, yabụ anyị lekwasịrị anya na akụkọ dị n'azụ mpempe ahụ karịa akara ụlọ ọrụ iji wepụta akwụkwọ ozi siri ike nke nwere ihe ịga nke ọma, nkekọrịta ọtụtụ, na dugara onye ọrụ na peeji nke ọdịda ebe ha nwere ike ilekwasị anya na isiokwu ahụ karịa ụlọ ọrụ. Ọbụna anyị jiri isiokwu Halloween mee ihe ebe ọ bụ na agbasiri ozi oge ahụ na Halloween!
Anyị lekwasịrị anya na nke abụọ bụ ka ekesa isiokwu ahụ -enweghị akara ngosi karie ike nke nwere ike ime ka ndị na-ebipụta akwụkwọ n'ịntanetị na-ala azụ n'ịkesa ozi ahụ. Ma ọ rụpụtara!
N'agbanyeghị nke ahụ, n'oge ndị ọzọ, anyị agbanyela usoro nke infographics nke enyere akara nke ọma site na saịtị nke ndị ahịa mana ọ bụghị ikwuputa ụdị a. Anyị chọrọ ka usoro ihe omuma ahụ na-ewulite ikike na ụlọ ọrụ ha nwayọ nke na ndị na-ebipụta akụkọ kesara usoro mgbasa ozi ma amataghị na ha siri ike akara… ọ dị ka ha niile nwere otu ụdị styling. Site na infographic ọ bụla, nkesa ahụ gbasaa. O di nwute, onye ahia (n'amaghi-ama) weghachitere aha ya mgbe o hapuru anyi ma ha tufuru ike nile nke ewuru ka m ghara igosi ha.
Na atụmatụ a dị ogologo oge, ebumnuche anyị bụ ka ụlọ ọrụ a hụ ka isi iyi nke nka n'ime ụlọ ọrụ ha. Yabụ - anyị na-eji infographics wu ha brand, ghara ilekwasị anya na ya.
Etu ị si ekike mgbasa ozi mgbasa ozi gị kesara nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ike ya ịkekọrịta. Njirimara siri ike nwere ike gbanyụọ ndị na-ebipụta ntanetị - n'agbanyeghị ike nke vidiyo, infographic ma ọ bụ akwụkwọ ọcha. Anyị na-enweta ebe a na-ede akwụkwọ kwa ụbọchị na infographics na ụlọ ọrụ ahịa - anyị na-ajụkarị ihe atụ ndị ahụ ebe ọ bụ nnukwu mgbasa ozi. Ndị nkwusa achọghị ka ha kpọsaa maka gị, ha chọrọ iji nnukwu mgbasa ozi ị mepụtara iji wulite uru na ndị na-ege ha ntị. Kpachara anya na omimi nke akara ị na-eji mgbe ị na-emepe ọdịnaya gị.
Tags: brandama infographicsmgbasa ozi agbasaInfographics AhịaVidio Ahịaabụghị akaraIhe omuma ihe omumamgbasa ozi mgbasa oziwhitepapers